Muxuu doonayaa Mahdi Guuleed, oo xildhibaanno badan u kaxaystay ra’iisal wasaaraha cusub? | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Muxuu doonayaa Mahdi Guuleed, oo xildhibaanno badan u kaxaystay ra’iisal wasaaraha cusub?
Sii’hayaha xilka raysal wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo wata koox isugu jirta xildhibaanno iyo wasiirrada xilalka sii’haya, ayaa booqasho ugu tegay raysal wasaaraha aan weli la ansixin ee uu magcaabay madaxweyne Farmaajo.
Mahdi Guuleed, waa raysal wasaare ku xigeenkii Xasan Cali Khayre, oo Farmaajo si sharci darro ah ugu magcaabay sii’hayaha xilka raysal wasaaraha. Waxaana uu u muuqdaa in uu quud darraynayo in ku xigeen uu u noqdo raysal wasaarahan xilka sii hayn doona 140 maalmood waa haddii baarlamanku ansixiyo e.
Muddadii uu ahaa Sii’hayay xilka Raysal wasaaraha , waxaa Mahdi Guuleed lagula kacay arrimo badan oo loo arkayay in ay hoos u dhacweyn ku keentay sumcaddiisa.
Shan kamid arrimhii ugu waawaynaa ee loo arkayay in lagu karaama dilay Mahdi Guuleed, ayaa waxaa kamida.
Mahdi ayaa muddii uu joogay wax la amray in uu meelmariyo Hindise sharciyeedyo iyo guddiyo ay sharci darro tahay in ay meel mariso xukuumadda aan xasaanad ka haysan baarlamanka. Qodobadaas iyo guddiyadaas ayaa waxba kama jiraan noqonaya markasta oo isbedel uu ka dhaco dalka.